SWEAT: Kayla Itsines Fitness 4.2.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.2.1 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား က်န္းမာေရး & ႀကံ႕ခိုင္ေရး SWEAT: Kayla Itsines Fitness
SWEAT: Kayla Itsines Fitness ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အဆိုပါကြံ့ခိုင်ရေး Get နှင့်, ချွေးနှင့်အတူ Kayla Itsines featuring ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလေ့ကျင့်ရေး app ကိုသင်လိုအပ်လှုံ့ဆျောမှုလေ့ကျင့်ခန်း။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသင်တန်းဆရာအနေဖြင့်ပညာရေးနှင့်အတူအမျိုးသမီးကျန်းမာရေးနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးအာရုံစိုက်ပါ။
သင်တန်းဆရာ Kayla Itsines, Kelsey ဝဲလ်, Chontel Duncan က, Stephanie Sanzo နှင့် Sjana Elise Earp အမျိုးသမီးတွေကျန်းမာရေးနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးမှတဆင့်သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးဘဝအသကျရှငျကိုကူညီချွေးရဲ့မစ်ရှင် join ။
ချွေးမျိုးစုံသင်တန်းဆရာနှင့်အစီအစဉ်များ hosting, အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေး၏မူလနေရာဖြစ်သည်:
• Kayla Itsines '' ပေးဖို့ BBG အစီအစဉ်ကိုအနည်းဆုံးသုံးစက်ကိရိယာများကို အသုံးပြု. High-ပြင်းထန်မှု plyometric လေ့ကျင့်ရေးတို့ပါဝင်သည်။ Kayla ရဲ့ပေးဖို့ BBG အားအားကစားရုံအသုံးပြုသူများအတွက်တစ်ဦးအလေး-based အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
• Kelsey ဝဲလ် '' Post-ကိုယ်ဝန်အစီအစဉ်ကိုအဓိကအစွမ်းသတ္တိကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်မိခင်တွေလည်းအဘို့ကိုယ်ဟန်အနေအထားတိုးတက်စေရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခုခံလေ့ကျင့်ခန်းကိုအသုံးပြုသည်။
• Kelsey ဝဲလ် '' PWR သို့အလေးချိန်-လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်ကိုပိန်ကြွက်သားနှင့်အစွမ်းသတ္တိကိုတိုးမြှင့်ဖို့မိန်းမတို့အဘို့အားကစားရုံ-based ခုခံလေ့ကျင့်ခန်းကယ်တင်တတ်၏။
• Stephanie Sanzo ရဲ့ BUILD powerbuilding အစီအစဉ်ကိုအမျိုးသမီးတွေကသူတို့ရဲ့ရုတ်သိမ်းစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာဖို့လိုသောအဘို့စုံလင်သည်။
• Chontel Duncan ကရဲ့ပြင်းစွာသောအခွန်အားနှင့်မြင့်မားသောပြင်းထန်မှုလေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးသမီးတွေကိုယ်အလေးချိန်နှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးတိုးမြှင့်ဖို့လိုအဘို့စံပြဖြစ်ကြသည်။
• Sjana Earp ရဲ့ယောဂအစီအစဉ်ကို Vinyasa-စတိုင်ခုခံပါဝင်သည်နှင့် yin-based ပြန်လည်နာလန်ထူပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ဟန်အနေအထားတိုးတက်စေရန်စီးဆင်း။
သင်အမြဲလိုချင်ဖူးတဲ့ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အကူအညီရရန်ကြံ့ခိုင်ရေး tracker နှင့်အတူ track ကျန်းမာရေး, အာဟာရနှင့်နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်း!
အခမဲ့လေ့ကျင့်ခန်း, စားသောက်အစီအစဉ်များနှင့်ရပ်ရွာလှုံ့ဆျောမှု၏7ရက်များအတွက်ယခု Join!
ချွေး features တွေ:
ကြံ့ခိုင်ရေး Tracker - လေ့ကျင့်ခန်း & Fitness စီမံကိန်း:
အနည်းဆုံးပစ္စည်းကိရိယာများကို အသုံးပြု. • 28 မိနစ်လေ့ကျင့်ခန်း
•ခုခံ, စိန်ခေါ်မှု, ချအအေး, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် cardio အတွက်လွယ်ကူသော-to-အတိုင်းလိုက်နာလေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အတူလေ့ကျင့်ခန်း
•လျာထားသောလေ့ကျင့်ခန်းအသစ်ကြံ့ခိုင်ရေးစိန်ခေါ်မှုများ, အလေးချိန်သစ်ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ audio တွေကိုယခုပါဝင်သည်။
ကျန်းမာရေး & အစားအစာစီမံကိန်း:
•အစားအသောက် tracker မျိုးစုံဦးစားပေးကိုက်ညီဖို့ menus တွေနှင့်ချက်ပြုတ်နည်းများအတူမုန့်ညက်အစီအစဉ်ပါဝင်သည်။
•အာဟာရလူတိုင်းအတွက်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့။ ကျန်းမာစံ, သက်သတ်လွတ်, pescetarian, lacto-သက်သတ်လွတ်, ovo-သက်သတ်လွတ်နှင့်အသက်သတ်လွတ်ဦးစားပေးဘို့အသင့်လျော်အစာစားခြင်း။
အလေးချိန်ခြေရာကောက် & လေ့ကျင့်ခန်း Motivation:
•အလေးချိန်စစ်မည်နှင့်ပုဂ္ဂလိက side-by-side ဓာတ်ပုံများနှင့်အတူအပတ်စဉ်တိုးတက်မှုနှိုင်းယှဉ်
•လေ့ကျင့်ခန်းစဉ်အတွင်း haptic နဲ့ audio အကြောင်းကြားစာများထံမှလှုံ့ဆျောမှုရယူရန်။
ပညာရေး & နောက်ထပ်:
•ကြံ့ခိုင်ရေး, အာဟာရနှင့်ကျန်းမာသောအစားအစာအကြံဉာဏ်ကိုဖုံးအုပ်ပညာရေးအကြောင်းအရာကို 300 ကျော်စာမကျြနှာ။
•ရရှိနိုင်အင်္ဂလိပ်, ဂျာမန်, ပြင်သစ်, အီတလီ, စပိန်, ပေါ်တူဂီ, ဒတ်ခ်ျနှင့်တရုတ် (ရိုးရှင်းသော) အပါအဝင် 8 ဘာသာစကားများ
ချွေးကပိုမိုလွယ်ကူသစ်တစ်ခု, အပြန်အလှန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသင်တန်းဆရာ app ကို အသုံးပြု. အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးနှင့်ကြံ့ခိုင်မှုကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့စေသည်။ ယနေ့ချွေးဒေါင်းလုပ်ဖြင့်သင့်ကျန်းမာရေးနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးထိန်းချုပ်ပါ!
ချွေးကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအသုံးပြုမှုကိုလစဉ်သို့မဟုတ်နှစ်စဉ်အခြေခံပေါ်မှာရရှိနိုင်ကာတက်ကြွစွာစာရင်းသွင်းမှာယူခြင်း, လိုအပ်သည်။ လစဉ်ကြေးပေးသွင်းရှေးခယျြသူဖောက်သည်များအခမဲ့ 7-နေ့ကရုံးတင်စစ်ဆေးကာလအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်ကြသည်။ နှစ်အလိုက် subscriptions ကိုဝယ်ယူနေ့စွဲကနေစုစုပေါင်းနှစ်စဉ်ကြေးငွေကောက်ခံနေကြသည်။ လစဉ်ကြေးပေးသွင်းအသုံးပြုသူများကိုတစ်လလျှင်ငွေကောက်ခံနေကြသည်။
ငွေပေးချေမှုရမည့်ဝယ်ယူ၏အတည်ပြုချက်ကိုမှာသင့်ရဲ့ Google Play စအကောင့်အားဖြင့်သင်တို့၏ခရက်ဒစ်ကဒ်မှတရားစွဲဆိုလိမ့်မည်။ subscription ကြိုတင်စာရင်းသွင်းထားသောကာလ၏အဆုံးမှဖျက်သိမ်းမှာအနည်းဆုံး 24 နာရီမဟုတ်လျှင်အလိုအလျှောက်သက်တမ်းတိုးမည်။ သက်တမ်းတိုးသည့်အခါစျေးနှုန်းမတိုးမြှင့်ရှိပါသည်။
subscriptions စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီး Auto-သက်တမ်းတိုးဝယ်ယူပြီးနောက် Google Play ကအတွက် Account Settings ကိုအတွက်ပိတ်ထား။ ဝယ်ယူပြီးတာနဲ့ပြန်အမ်းဟူသောဝေါဟာရကိုမဆိုအသုံးမပြုဘို့ပေးအပ်မည်မဟုတ်ပါ။
SWEAT: Kayla Itsines Fitness အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
SWEAT: Kayla Itsines Fitness အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
SWEAT: Kayla Itsines Fitness အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
SWEAT: Kayla Itsines Fitness အား အခ်က္ျပပါ
lakdawala စတိုး 329 551.9k
SWEAT: Kayla Itsines Fitness ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း SWEAT: Kayla Itsines Fitness အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 4.2.1
ထုတ်လုပ်သူ Sweat with Kayla
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.kaylaitsines.com/pages/terms-and-conditions
လက်မှတ် SHA1: 4E:C2:61:4A:A9:BB:4D:9E:76:94:27:60:60:F3:B5:CC:8B:EA:D0:02
အဖွဲ့အစည်း (O): The Bikini Body Training Company
နယ်မြေ (L): Adelaide
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): SA
SWEAT: Kayla Itsines Fitness APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ